Single mgbidi ikuku enweghị
Karama ikuku enweghị ikuku
Single mgbidi ude mmiri
Karamaịla ude mmiri
Ibe ude ude mmiri
Otu ite mmachi mgbidi
Karama eji Agagharị
Mkpụrụ osisi Sprayer
Nkwakọ ngwaahịa etemeete
Lipgloss / Lipstick tube
Ndota nkuchi anya
Ọkpụkpụ gbawara agbawa
Ngwongwo ọla ọcha gosipụtara 15ml 30ml 50ml Cos ...
Square Bottom Shape PET ịghasa okpu plastic Ezi Ime ...
25% Ihe PCK eji eme ihe eji eme ihe
Amber PET ude Kalama rọba rọba Cosme ...
Jiri Nji Eji Nji Nji Ejiri Nkpuru Ibe Na-acha aja aja Maka ụmụ nwoke ...
2 Na 1 Tubes Dual Chamber Tubes
site na nhazi na 20-07-16
1. Ike: 25ml gbakwunyere 25ml, 30ml gbakwunyere 30ml, 50ml gbakwunyere 50ml, 100ml gbakwunyere 100ml na ndị ọzọ. 2. Ihe ohuru: usoro abuo juputara n’ime ulo abuo ma puta iche, ma jikota onu.
PET Materi Series packaging Ohi Toner
1. TE04 airless pump cream cream cream na onye na-etinye ya, nhọrọ nke ihe ndozi zinc alloy. 2. PET ihe ndebe ngwongwo ngwongwo mmiri 120ml, karama akpukpo 200ml na ite ude 50ml. 3. TB08 100ml ezi mmachi ịgba karama
Igwe agịga agịrịga na-enweghị ntụpọ na mpempe akwụkwọ dị iche iche
1. kalama jiri mmanu mmanu ahu puru iche. Ngwunye Sanitizer Mpempe 3030 Maka ụmụ akwụkwọ. 3. Pita Kalama ejiri Mpeepe na Mpekere.
Kpekere pedị Nzuzo Pịkụl
TB01 Foam Pọta kalama na-eche echiche imewe, ihe ịchọ mma nke silky foam. Ihe eji eme PP ihe ikuku Peeji Pileti, ihe puru iche nwere ike ime uto n’erecha agba ahihia. PJ42 PCR Jar 100% Ntughari plastik, PP-PCR ihe eji eme ihe na-acha uhie uhie bụ ihe aka ọzọ.
Deodorant kalama na Dropper kalama ude Jar Set
site na nhazi na 20-07-09
PDD01 Deodorant Bottle Concise qaabka imewe, 10ml deodorant nwere ihe iko na bọọlụ na-eji ọla nchara arụ ọrụ. Ihe eji eme ihe P16 Airless kalama PP, agba edoziri na mbiputa anara. Ihe eji eme ihe PDW01 Dropper na PJW01 Cream Jar Glass ihe, panton agba ite na karama dropper, silksc…
Dual Chamber Bottle Na Eco-enyi na enyi PCR Airless kalama
PL19 100ml Dọlọ berlọ Imepụta Igwe Ime ụlọ Dọba ọnụ ụlọ, na-ejuputa ụdị ngwaahịa abụọ, gbapu ụdị usoro abụọ ahụ n'otu oge. TA04 AS Ikuku karama kpochara kpochapu udi ocha, nke onwe edo edo na mbiputa anakwere. PA66 Echo-enyi na enyi PCR Airless Kalama Topfeelpack bụ…
Mpempe akwụkwọ Chamlọ Ihe Ngwakọta ama ama na Nlekọta Anya na Ahụhụ Anya
site na nhazi na 20-07-07
Mkpokọta Ngosiputa Ngwa Ngosiputa Mma na July site na TopfeelPack, Botloles Dual Chamber Ama ama maka Nlekọta Ahụ & Anya.
Iri ọkpọ nke PET na-abawanye
Site na nkwupụta nke onye nyocha Mac Mackenzie, arịrịọ ụwa maka karama PET na-abawanye. Nkwupụta ahụ na-ekwukwa na ka ọ na-erule 2030, ọchịchọ maka rPET na Europe ga-amụba ugboro 6. Pieterjan Van Uytvanck, onye isi nyocha na Wood Mackenzie, kwuru, sị: "Ike nke…
Ihe omuma banyere nke karama ikuku
1. Banyere kalama ikuku anaghị egbochi ikuku site na ikuku iji gbochie ngwaahịa na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ikuku na-emebi ma na-emetụ ikuku. Echiche dị elu na-akwalite ọkwa ngwaahịa. Vacuum karama ndị na-agafe ...
Tẹ: + 86-755-25686685